Sazi kangakanani ngamayeza okubulala izitshabalalisi?
Ukuveliswa kokutya okuqhelekileyo eUnited States kubandakanya iintlobo zemithi yokubulala izitshabalalisi. Amafama ajonge kwi-synthetic herbicides, insecticide, fungicides kunye nezichumisi ukongeza isivuno sezityalo. Ukusetyenziswa kweekhemikhali kuvelise amashumi eminyaka yeengxaki ezibhaliweyo kwindalo esingqongileyo, kwaye ziyavunywa ukuba zibambe umngcipheko kwimpilo yabantu. Kodwa inyani malunga nendlela eziyityhefu ngayo le michiza; kwaye ngawaphi amanqanaba onyamezelo abantu abanokumelana ngokukhuselekileyo nokutya, amanzi kunye nokuvezwa komoya kuhlala kunzima ukufumana. Abalawuli ikakhulu baxhomekeke kwizifundo zesayensi ezixhaswe ngemali kwaye zikhokelwa ziinkampani zezolimo ezithengisa iikhemikhali ukugweba ukhuseleko lwazo, kwaye inkxaso-mali kunye namathuba ohlalutyo oluzimeleyo alinganiselwe.
NgeyoKwindla ngo-2015, esinye sezona zisetyenziswa kakhulu emhlabeni ngamayeza okubulala ukhula, abizwa ngokuba yi-glyphosate, sahlelwa yi-World Health Organisation njenge “mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini. ” Ezinye i-pesticides ezisetyenziswayo, kubandakanya i-chlorpyrifos kunye ne-2,4-D, zibeka ingozi eyaziwayo ebantwini nakwindalo. I-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo e-US ikhuthaza ukwandiswa kweentlobo ezintsha zezibulali zinambuzane ezisekwe kwizinto zendalo endaweni yeekhemikhali zokwenziwa, ezibizwa izinto eziphilayo. Oku kujongwa ngokubanzi njengobungqongileyo kwindalo. Kodwa ukusetyenziswa ngokubanzi kwemichiza yokubulala izinambuzane kuyaqhubeka, kuvelisa iibhiliyoni zeedola kwintengiso yeenkampani zezolimo.
Amaphepha eMonsanto-Iimfihlo eziBulalayo, iCor ...
Kutheni silanda isicwangciso seBill Gates ...
Izicwangciso zikaBill Gates zokulungisa iinkqubo zokutya ziya ...
Izixhobo eziphambili kwii-Pesticides
Ukujikeleza / iGlyphosate
IGlyphosate: Ukuxhalaba kwezempilo malunga neyona Pesticide isetyenziswa kakhuluIphepha leNqaku le-USRTK
Iindaba zeGlyphosate ezivela kuphando lwe-USRTK
Amaphepha eMonsanto: Amaxwebhu aphambili nohlalutyo kunye namatyala enkundla abandakanya iRoundup
UCarey Gillam IMonsanto Roundup kunye neDicamba Trial Tracker -Uhlaziyo oluqhelekileyo kwiindaba zesimangalo
Ukunika ingxelo kunye nohlalutyo kwizilingo zeMonsanto Roundup
Amaphepha eDicamba: Amaxwebhu aphambili kunye nohlalutyo kunye namatyala enkundla abandakanya i-dicamba
Februwari 8, 2021
Uvimba wezibulali zinambuzane>